२०७७ असोज १४, बुधबार | eAdarsha.com
२०७७ असोज १४, बुधबार
सृजनशिलताको विकास होला । साझेदारी कार्यको आरम्भ गर्दा दिगो रुपमा फाइदा लिन सकिनेछ । अनुसन्धनात्मक कार्यमा चासो रहनेछ । सामाजिक कार्यबाट सम्मान पाइनेछ । अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ ।
वहानादिको उचित प्रयोगले गर्दा महत्वपूर्ण कार्य बन्नेछ । भौतिक सुखसुविस्ता उपभोग गर्न पाइनेछ । ठूला व्यक्तिसँग संगत रहनेछ । विवादित कार्यमा तपाईँकै जीत हुनेछ । पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ ।
छोटो रमाइलो यात्राको संभावनालाई नकार्न सकिन्न । नयाँ नेतृत्वदायी कार्यको जिम्मा लिँदा समर्थकहरु बढ्नेछन् । कल्याणकारी कार्यमा मन रमाउनेछ । व्यवसायबाट पनि लाभकारी समय रहेको छ ।
व्यर्थको कार्यमा समय वित्नेछ । गोपनियता बाहिरीँदा समस्यामा परिनेछ । विना तयारी कार्यमा लाग्दा अन्योलको वातावरण बन्नेछ । स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ । दैनिक कार्यमा नै व्यस्थ रहनु उचित हुनेछ ।
काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ । विलासिताका कार्यमा मन जानेछ । मायाप्रेमको बन्धन कसिलो रहला । नेतृत्वदायी कार्यको जिम्मा पाइएला । मनोरञ्जनात्मक समारोहमा सहभागी हुन पाइनेछ ।
समस्या तथा चुनौति थपिनेछ । शत्रू पक्षले दुःख दिन खोज्नेछन् तर प्रयत्न गर्दा अधुरा काम कार्यलाई पूर्णता दिन सकिनेछ । गुमेको धन हात पर्दा खुसी भइनेछ । आजको दिन मिश्रीत फलदायी रहने देखिन्छ ।
अध्ययन अध्यापन एवं प्रतिष्पर्धात्मक काम व्यवहारमा अग्रपंक्तिमा आउन सफल भइनेछ । ऐतिहासिक कार्यको आरम्भ होला । सकरात्मक कार्यको चिन्तन हुनेछ । सन्तानपक्षको साथले कार्य बन्नेछन् ।
झन्झटिका कार्य सम्पादन गर्नुपर्दा दिक्क लाग्नेछ । अनावश्यक कार्यमा समय वित्नेछ । विकल्पको खोजीले गर्दा महत्वपूर्ण कार्यमा पछि परिनेछ । मातृ पक्षको साथ सहयोगले कार्य गर्दा सफल भइनेछ ।
हर्षको खबर सुन्न पाइनेछ । व्यापार व्यवसायबाट अनपेक्षित लाभ मिल्दा खुसी भइनेछ । साथीसंगीको सहयोगले कार्य बन्नेछन् । अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ । आकस्मिक धन लाभको योग समेत देखिन्छ ।
दोधारेपनले सताउन सक्छ अग्रज व्यक्तिको साथले निर्णय लिनु होला । धनसञ्चय गर्न मन लाग्नेछ । व्यवस्थापन पक्ष सबल रहनेछ । घरायसी सरसामन जोडिनेछ । अल्छिपना त्यागेर कार्यमा लाग्नुहोला ।
आजको दिनमा थालेका काम कार्यले पछिसम्म लाभ मिल्नेछ । तपाईँको कार्यले छरछिमेकमा बेग्लै तरंग पैदा गर्नेछ । धार्मिक कार्यमा आस्था जाग्नेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा थपिनेछ । नयाँ स्थानको भ्रमण हुनेछ ।
बोलेका कुरा पूरा गर्न गाह्रो पर्नेछ । नकारात्मक कार्यमा सहभागी भइनेछ । आर्थिक पक्ष कजोर रहनेछ । व्यवसायबाट आयआर्जन राम्रै भएता पनि अनावश्यक स्थानमा लगानि हुनसक्छ, सजक रहनु होला ।
वि.सं. २०७७ साल असोज १४ गते बुधबार, तदनुसार ई.सं. २०२० सेप्टेम्बर ३० तारिख, प्रमादीनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, शरदऋतु, चान्द्रमान अनुसार अधिक आश्विनशुक्लपक्षको चतुर्दशी तिथि वेलुका ११ः४७ बजेसम्म, त्यसपछि पूर्णिमा तिथि रहनेछ ।
नक्षत्र पूर्वभाद्रपदा रात्रि ३ः३८ बजेसम्म, त्यसपछि उत्तरभाद्रपदा रहनेछ ।
विष्कुंभादी योग गण्ड वेलुका ९ः३५ बजेसम्म, त्यसपछि बृद्धि रहनेछ ।
आनन्दादी योग पद्म ।
करण गर पूर्वान्ह ११ः६ बजेसम्म, त्यसपछि भद्रा रहनेछ ।
श्रीसूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा : कुम्भ राशिमा वेलुका ९ः१८ बजेसम्म रहनेछ ।
सूर्योदय ५ः५६ बजे, सूर्यास्त : बेलुका ५ः४९ बजे ।